Neyimaar warra Biraaziliifi daldala kubbaa miilaa addunyaa biiliyoona jahaa - BBC News Afaan Oromoo
Neyimaar warra Biraaziliifi daldala kubbaa miilaa addunyaa biiliyoona jahaa
Oduun jijjiirraa taphattoota kubbaa miilaa yeroo Kilabiin Faransaayi Paariseen Jarman Neyimaariin galmee gabaa akka addunyaatti ture cabsuudhaan Ganna darbe Baarseloonaa irraa fudhatetti miidiyaalee addunyaa fuula jalqabaa qabatanii turan.
Kilabiin Faransaay kun yuroo mil. 222 (dol. mil. 260; paawundii mil. 200) kaffaluudhaan galmee Kanaan dura Maanchester Yunaayitid Paawul Pogbaadhaan Juuventuusirraa Hagayya 2016 paawundii Ml. 89m baasee bitee ture cabsan.
Kun gabaan kubbaa miilaa akka industirii addunyaa guddaa akka ta'e agarsiisa.
Akka ragaan FIFA, qaamni ispoortii addunyaa bulchu agrasiisutti, bara 2017 keessa akka addunyaatti jijjiirraawwan 15,291 gaggeeffamaniiru. Kunis baasii doolaara bil. 6 (paawundii bil. 4.58) ta'uudhaan galmee haaraa ta'eera.
Jijjiirraan akka addunyaatti jiru taphattoonni biyya tokko gara biyya biraatti kan geeffaman yommuu ta'u jijjiiraan biyya keessaa garuu kilabii tokkorraa gara kilbii biraa biyyuma kessatti taasifamuudha.
Kan guddinaan akka galmee haaraatti guddina agrsiise gabaan kubbaa miilaa ammaaf hanga yeroo jijjiirraa 2018 jalqabutti kanumaan itti fufa. Gabaan baranaas kan duraan ture dola. bil. 8 yommuu ta'u, kan bara 2016 irratti %25 dabaleera.
"Gabaan kubbaa miilaa akkas dabluuf waanota kanaaf sababa ta'an lamatu jiru," jedha Harii Filiipsi ogeessi maallaqa kubbaa miilaa gorsaan Poortilaandi Londonitti argamu.
"Inni jalqabaa gama Chaayinaatiin dabalaa dhufuufi kaffaltii jijjiirraa taphattootaaf baasuuf qophii ta'uu ishee yommuu ta'u, kan lammaffaa baasii guddaa Kilaboonni Pirimeraa Liigaa Ingliz baasanidha. Akka kana godhan kan isaan gargaaremmoo waliigaltee maallaqa guddaa itti argatan gabaa TV ta'uusaati. Dhimmoonni kun lamaan gabaa kubbaa miilaa addunyaa ol kaasaa jiru. "
Taphattoota biyya ambaaf taphatan keessa tokko kan ta'e taphataan Chelsii durii Raamiires wayita amma Chaayinaaf taphataa jira
Kilaboonni Chaaayinaa bara darbe baasii guddaa dol. mil. 451 jijjiirraa irratti baasaniiru. Kunis %168 dabalata agarsiiseera. Kun ammoo Inglizitti aansee baasii jijjiirraa taphatootaaf baasanii addunyaatti sanaffaa ishee taasisa. Inglizi, biyya kilaboonni taphattoota ciccimoo hanag dol. bil. 1.37 tiin taphattoota addunyaaf dhiyeessanidha. Sadarkaadhaan Jarman, Xaaliyaanfi Ispeeni tokko amma sadiitti sadarkaa qabataniiru.
Waggoot dhiyoo keessa Chaayinaa keessatti invastimentiin kubbaa miilaarratti gaggeeffamu guddaa dabalaa jira. Kunis Pireziidaantii biyyattii Jiin Piingiin deggeramuun karoora Chaayinaa biyyaa kubbaa miilaatiin beekamtuu taate gochuudhaan bara tokko Waancaa Addunyaa qopheessuufi mo'achuudhaaf yaadamedha.
Karaa ittiin hiyyummaa keessaa ba'aniidha
Kilaboonni Chaayinaan baasii baasuudhaan yoo xiqqate taphataa tokko Awurooppaarraa fiduudha. Garuu dirqama Awurooppaarraa ta'uu hin qabu.
Taphatoonni maqaa gaarii qaban Gara gabaa Eesiyaa Bahaa kana deeman baayyeen Ameerikaa Kaabaarraati. Ragaan FIFA akka agrsiisuttis taphattoonni Biraaziliifi Arjentiinaa akka addaunyaatti warra baayyee jijjiiramanidha.
Ol adeemtoota Braaziil biratti kubbaa miillaa taphachuun kara itti hiyyummaa keessa bahaniidha.
"Dhimma hawaasi-dinagdeedha, kubbaan miilaa kara ittiin hiyyummaa keessaa ba'aniifi dargaggoonni maatii isaanii bal'aa maallaqaan ittiin gargaaranidha ," JedhaFiliip
Biyya alaatti erguuf taphattoota kennaa qaban horachuu qofa osoo hin taane, Biraazil, kan yeroo ammaa biyyoota 118 keessa taphatan, maallaqa isaan waliigala bara 2016 argamsiisan $594m ta'a.
Oliviyer Tebiilii: Kubbaa miilaa irraa gara oomisha wayinii
Viidiyoo, ''Dubartoonni ispoortii kamirrattuu yoo hirmaatan argee hin beeku''
'Maqa balleessiin MM Abiy irratti adeemsifamaa jira' - Waajira Ministeera Muummee
Addabaabaayii guddicha seenaa gurguddoo biyyattii keessummeessu